Mpivarotra amoron-dalana : faritra afaka haba lehibe ho azy ireo eto an-dRenivohitra | NewsMada
Mpivarotra amoron-dalana : faritra afaka haba lehibe ho azy ireo eto an-dRenivohitra
Par Taratra sur 26/04/2016
Tombanana eo amin’ny 2.000 ny isan’ireo mpivarotra, manodidina eo Analakely, Behoririka, Isotry. Mpivarotra lamba, kiraro, poketra, haingon-trano, telefaonina, sns. Mbola hafa ireo mpivarotra any Andravoahangy, 67 ha … Hafa ihany koa ireo mpivarotra sakafo sy kojakoja madinika samihafa izay misy anarivony. Faritra afaka haba iray lehibe ho azy ireo eto an-dRenivohitra. Nohazavain’ny mpamongady iray fa amin’ireo tranombarotra lehibe manodidina eo Analakely sy Behoririka ireo ihany no anisan’ny mpamatsy entana ireny mpivarotra ireny. Misy ihany koa orinasa faritra afaka haba mpamatsy entana azy ireo.
Samy manana ny fifanarahany
Ireo mpivarotra ireo, ny sasany mpiasan’ireny tranombarotra na orinasa ireny ihany teo aloha. Saingy, sahirana na mody sahirana ireo mpampiasa handoa karama isam-bolana, ka mifanaraka amin’ny mpiasany ihany hivarotra eny amoron-dalana. Ny sasany indray, avy hatrany, maka entana izay ilainy ao amin’ilay tranombarotra. Samy manana ny fifanarahany ny rehetra, ao ohatra, ny mandoa vola mialoha, manao antoka, misy mandeha amin’ny fifampitokisana tsotra.
Betsaka ny vehivavy
Ahitana sokajiny samihafa koa ireny olona ireny, ny manana entana mitentina an’hetsiny ariary maromaro, izy ihany mifanaraka amin’izay olona akaiky azy ary samy mivarotra ; ny sasany manana entana roa alina hatramin’ny iray hetsy. 80 % amin’izy ireo vehivavy avokoa. Ahitana lehilahy betsaka ireo mpivarotra kojakoja elektronika sy telefaonina.
Tsy vahaolana “Mangabe”
Iaraha-mahafantatra tato ho ato fa manenjika azy ireo ny kaominina amin’ilay fiara “Mangabe”, satria mpivarotra tsy ara-dalàna. Ny fototry ny olana anefa, tsy fananan’ireo olona ireo asa, ny kaominina rahateo nampanantena tsena ho azy ireo, nefa tsy hita hatramin’izao. Tsy hahafoana velively ny mpivarotra amoron-dalana, eto Antananarivo, io fomba fiasan’ny kaominina io. Mandraoka sy mifampizara ny entan’ireo olona ireo indray aza ny ataon’ny “Mangabe”. Ny herinandro lasa teo, nisy ny fifandonan’ireo mpiasan’ny kaominina amin’ilay “Mangabe “sy ny mpivarotra. Koa vahaolana maharitra, fanarenana ny toekarena ihany amin’ny alalan’ny famoronana asa, miatomboka amin’ny fanavaozana ny drafitry ny tanàna ho fanomezana endrika vaovao ny maha Renivohitr’i Madagasikara, anisan’izany ny fanitarana ny tanàna.
Une réponse à "Mpivarotra amoron-dalana : faritra afaka haba lehibe ho azy ireo eto an-dRenivohitra"
Firenena Merina 26/04/2016 à 11:30
Tsy anjaran’ny Tanan’Antananarivo ny mitady asa hoan’ny mpihavy tonga eto Antananarivo.
Manana ny zoany koa ireo tompo-tany eto Antananarivo hiaina amin-kahalalahana eto antanindrazany.
Anjaran’ny mpiandraikitra any @ faritra ny mapandroso ny tanana misy azy mba tsy hiala any amin’ny faritra misy azy ny olona.